Ma duufaan baaye sidee ayey u samaysaa | Saadaasha Shabakadda
Waan jeclahay duufaanka. Marka cirka ay ku daboolaan daruuraha Cumulonimbus, ma caawin karo laakiin waxaan dareemayaa cajiib, ku dhowaad sida ugu badan ee kuwa jecel qoraxda ay dareemayaan markay wataan boqorka xiddigga ayaa soo baxa markii ugu horreysay maalmo badan.
Hadaad adiguba jeceshahay iyaga, hubaal waxaad xiiseyn doontaa inaad aqriso wax kasta oo aan kuu sheegi doono marka xigta. Raadi waxa duufaantu tahay, sida ay u samaysan tahay iyo waxyaabo kaloo badan.
1 Waa maxay duufaanku?
3 Noocyada duufaanka
3.2 Ciid ama siigo
3.3 Baraf ama roobdhagaxyaale
3.4 Ee walxaha iyo noolaha
3.5 Tuubbooyinka biyaha
3.6 nooc duufaan
Waa maxay duufaanku?
Duufaan ayaa ah dhacdo lagu garto jiritaanka laba ama in ka badan oo hawo ah oo ku jira heerkullo kala duwan. Is-barbardhiggan kuleylka ah wuxuu keenaa jawiga inuu xasillooni darro keeno, taasoo keenta roob, dabaylo, danab, onkod, hillaac iyo mararka qaarkoodna baraf.
In kasta oo saynisyahannadu u qeexaan duufaan daruur oo awood u leh inay soo saarto onkod la maqli karo, Waxaa jira ifafaalo kale oo sidoo kale looyaqaano sidan oo kale, kuwaas oo ah kuwa dhulka dushiisa ku xiran roob, baraf, roob dhagaxyaale, koronto, baraf, ama dabeylo xoog leh kaas oo qaadi kara walxaha ku jira hakinta, walxaha ama xitaa noolaha.
Haddii aan ka hadalno astaamihiisa, shaki la'aan waa inaan ka hadalno waxyaabaha ku saabsan daruuraha taagan soo saara. Kuwaas waxay gaari karaan dherer cajiib ah: laga bilaabo 9 illaa 17km. Taasi waa halka ay tropopause ku taal, taas oo ah aagga kala-guurka ee u dhexeeya troposphere iyo stratosphere.
Wareegga dhaqdhaqaaqa duufaanku badanaa wuxuu leeyahay wajiga hore ee sameynta, wejiga dhexe ee qaan-gaarnimada iyo wajiga ugu dambeeya ee suuska oo soconaya illaa hal ama laba saacadood. Laakiin guud ahaan waxaa jira dhowr unug oo isdabajoog ah oo isku mar dhaca, markaa ifafaalaha ayaa socon kara ilaa maalmo.
Mararka qaarkood duufaan u xuubsiiban karto maamul heer sare ah, taas oo ah duufaan weyn oo meerto ah. Waxay awood u leedahay inay ka dhalato taxanaha socodka iyo hoos udhaca iyo roob badan. Waa nooc sida duufaanta ugu fiican 😉. Iyada oo ay ku jiraan dhowr wareeg oo hawo ah, taas oo ah, dabaysha ku soo wareegeysa xarun, waxay soo saari kartaa biyo-baxa iyo duufaanno
Marka duufaan ayaa dhici kara Nidaamka cadaadiska hooseeya wuxuu u baahan yahay inuu ku dhowaado midka cadaadiska sarreeya. Midka hore wuxuu yeelan doonaa heer kul hoose, halka kan kalena uu diiran yahay. Isbarbardhiggan kuleylka ah iyo sifooyinka kale ee cufnaanta hawo qoyan asal ahaan ka soo kacaya koritaanka iyo hoos u dhaca dhaqdhaqaaqa soo saarista saameynta aan aad u jeclaan karno ama diidmada liddi ku ah, sida roobab culus ama dabeylo, annaga oo aan ilaawin dheecaannada korantada. Dheecaankani wuxuu soo baxayaa marka la gaadho danab burburka hawada, oo xilliga danabku soo baxo. Halkaas, haddii xaaladuhu sax yihiin, danab iyo onkod ayaa ka soo unkami kara.
In kasta oo dhammaantood ay u samaysan yihiin wax ka yar ama ka yar si isku mid ah, iyadoo ku xidhan astaamahooda waxaan kala saari karnaa dhowr nooc. Kuwa ugu muhiimsan waa:
Waa dhacdo in waxaa lagu gartaa joogitaanka danab iyo onkod, kuwaas oo ah dhawaaqyada uu soo saaray kan ugu horreeya. Waxay ka soo jeedaan daruuraha Cumulonimbus, waxaana la socda dabaylo xoog leh, iyo mararka qaarkood roob culus, baraf, ama roob dhagaxyaale.
Ciid ama siigo
Waa dhacdo ka dhacda gobollada oomaneyaasha iyo semi-oomane ee adduunka. Dabayshu waxay kala kaxaysaa qaybo fara badan oo xawaare ka badan 40km / saacaddii, isagoo awood u leh inuu ku dhammeeyo qaaradaha aad u fog.
Baraf ama roobdhagaxyaale
Waa duufaan ay biyuhu ku dhacaan qaab baraf ama roobdhagaxyaale. Waxay kuxirantahay xoogiisa, waxaan kahadli karnaa daadad baraf daciif ah ama daran. Markay weheliso dabayl dabayl iyo roobdhagaxyaale ah, waxaa loo yaqaan baraf baraf ah.
Waa dhacdo aad u soo noqnoqota inta lagu jiro xilliga qaboobaha meelaha joogga sare, maadaama dhaxanku ku badan yihiin gobolladan.
Ee walxaha iyo noolaha
Waxay dhacdaa markay dabayshu sido kalluun ama shay, tusaale ahaan, oo aakhirka waxay ku dhacaan dhulka. Waa duufaanta ugu layaabka badan dhammaanteed, waana suurtagal inay tahay midda ugu yar ee aan jeclaan lahayn inaan aragno.
Waa daruuro tiro badan oo si dhakhso leh u wareegaya kuna soo dhacaya dhulka dushiisa, badda ama haro. Waxaa jira laba nooc: tornaadis, kuwaas oo ah duufaanno ku samaysmay biyo ama dhul markii dambe u gudbay aaladda biyaha, ama kuwa aan toonna ahayn. Jiritaanka tan hore waxay kuxirantahay mesocyclone, taas oo ah hawo wareega oo dhexroorkeedu yahay 2 ilaa 10 km taasi oo ka bilaabmaysa duufaan wax soosaarida taasna waxay sababi kartaa waxyeelo weyn oo leh dabeylaha ugu badan ee 510 km / h; marka laga hadlayo kan dambe, waxay ka samaysan yihiin hoosta daruuraha waaweyn ee cumulus mana aha kuwo rabshado wata (dabeylaha ugu badan ee ay wataan waa 116km / saacaddii).
Waxay yihiin hawo aad u tiro badan oo ku rogrogta xawaare sare oo aakhirkeeda hoose uu la xiriiro dhulka dushiisa iyo dhamaadka sare oo leh daruur cumulonimbus ah. Waxay kuxirantahay xawaaraha wareega iyo waxyeelada ay keento, dabeylaha ugu badan ee dabeylkeedu wuxuu noqon karaa 60-117Km (F0) ama ilaa 512 / 612km / h (F6).
Ma ogtahay waxa duufaanadu ahaayeen iyo sida ay u samaysmeen?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay duufaan sidee u sameysmaa